Waan ognahay gudaha iMac Pro, mahadnaqa kala-goynta ay fulisay iFixit | Waxaan ka socdaa mac
iFixit waxaa looga yaqaanaa dunida Apple dhexdeeda inay tahay mid kamid ah shirkadaha ugu horreeya ee si taxaddar leh u kala furfura qayb kasta oo ka mid ah qalabka cusub ee Apple. Shirkaddan shaqadeedda ugu weyn ay tahay dayactirka qalabka, waxay u maleyneysaa inaysan jirin wax ka fiican oo lagu ogaan karo waxa aad damacsan tahay inaad hagaajiso mustaqbalka, marka loo eego maanta laga bilaabo sida mid kasta oo ka mid ah qaybaha alaabooyinka loo rakibo.
Munaasabadan, ayaa kala go'ay oo nala wadaagay falanqeyntiisa qaabka aasaasiga ah ee iMac Prama, oo leh processor 8-core ah, 32 GB oo RAM ah iyo 1TB SSD.
Aynu ka soo gudubno waxyaabaha ugu caansan uguna adag. iFixit wuxuu inoo muujiyaa inta RAM, CPU iyo SSD waa kuwo qaabaysan oo sidaas darteed waa la beddeli karaa. Haddii aad rabto inaad wax faahfaahin dheeraad ah ka ogaato, waad akhrin kartaa maqaal dhajiyay maalin ka hor boggan. Laakiin qaybaha intiisa kale, oo ay ku jiraan xusuusta garaafyada, waa la iibiyaa, sidaas awgeed waxay badashadooda ku adkeyneysaa.
Farqiga ugu weyn ee ugu weyn ee ka yimaada iMac 5k (kii ka horreeyay) ayaa ah taas ma laha booska lagu beddelo RAM-ka. Sidaa darteed, maanta sida ugu wanaagsan ee loo beddelo RAM-ka waa in loo tago Dukaan Apple ah ama alaab-qeybiyaha Apple ee idman, oo howsha fulin kara. In keligeen lagu sameeyo, ama dukaan dayactir guud, laguma talinayo. Qaybaha intiisa kale, processor-yada CPU iyo SSD, sidoo kale waa la beddeli karaa. Si kastaba ha noqotee, waxay yihiin kuwo loogu talagalay Apple, markaa ma ogin haddii qaybaha guud ay shaqeyn doonaan.
Sidii aan u gudubnay GPU waa la iibiyaa, taasoo adkeyneysa bedelkeeda. Qeybtaan oo dhan dib ayaa loo naqshadeeyay. Sida Apple ku dhawaaqday, aad ayey uga duwan tahay wixii kale ee iMac ah. Sababta tan ayaa ah horumar la taaban karo oo ku saabsan kuleylka ka daadinta qalabka. Hadda waxaan haysannaa qaboojiye laba taageere ah, kaas oo ku jira erayga iFixit:
Waa kuleyl aad u weyn iyo hawo weyn
Bandhigu wuxuu umuuqdaa inuu lamid yahay qaab dhismeedka 5-inch iMac 27k. Qiimaynta guud ee iFixit ee ku saabsan Awoodda kala-goynta iyo beddelidda qalabka waa 3kiiba 10, taas oo muujinaysa in maanta aysan ka mid ahayn Mac-yada ugu fudud ee la beddeli karo. Waa run inay qaadanayso dhowr sano in la bilaabo in loo baahdo awood dheeri ah mashiinkan weyn, waqtigaasna waxaad had iyo jeer u tagi kartaa shirkadda Apple qaybiyaheeda ballaadhinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Waan ognahay gudaha barnaamijka 'iMac Pro', mahadnaqa burburintii ay fulisay iFixit